Posted by Pannavamsa / 12:05 AM / Comments: (0)
၂၀. ၆. ၂၀၁၅ ရက်နေ့မှာ ဗုဒ္ဓရံသီကျောင်းဒကာ၊ ဒကာမ မိသားတစ်စုမှ နေ့ဆွမ်းပင့်ကပ်ရင်း သူ့တို့ရဲ့ သားငယ်ကို ရှင်ပြုပေးချင်ကြောင်း လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်၊ ကျောင်းပြန်ရောက်ပြီး ညနေပိုင်းမှာ ကျောင်းဂေါပကများကို ပြောပြတဲ့အခါ အခြားအခြားသော မိသားစုများလည်း ရှင်ပြုအလှူပွဲ ပြုလုပ်ချင်ကြတာ ရှိတဲ့အကြောင်းပါ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ရှင်ပြုပေးချင်ကြတဲ့ မိသားစုများအားလုံး အတူတကွပါဝင်ကြပြီး ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြရန်အတွက် ၂၇. ၆. ၂၀၁၅ ရက်နေ့မှာ ဗုဒ္ဓရံသီ အသင်းမိသားစု များ ညှိနှိုင်းစည်းဝေးပွဲ ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ အစည်းအဝေးပွဲသို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက် ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ကြ သူများရှိသလို ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ကြသော်လည်း ဖုန်းအဆက်သွယ်လုပ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ မေးမြန်းကြသူများလည်း ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီနေ့က အသင်းဂေါပက အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဗုဒ္ဓရံသီအသင်း မိသားစုများ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပြီး အလှူပွဲကျင်းပပြုလုပ်မယ့်ရက်ကိုလည်း သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အစည်းဝေးကျင်းပ ပြုလုပ်စဉ်က သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ကြမည့် ရှင်သာမဏေလောင်း လေးပါး ငါးပါးခန့်သာ ရှိမည်ဟု သိရှိရသော် လည်း အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြောကြားကြကာ စာရင်းပေးသွင်းကြသဖြင့် (၁၂) ပါးထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ စုပေါင်း ရှင်ပြုအလှူပွဲတော်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နဲ့ ၁၉ ရက်တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့ ညနေ ၃း၀၀ နာရီအချိန်မှာတော့ စုပေါင်းရှင်လောင်းလှည့်ပြီး ရှင်သာမဏေအဖြစ်ကို ခံယူကြမှာဖြစ်သလို မိဘများကလည်း သားရတနာကို အကြောင်းပြုပြီး သာသနာ့ အမွေခံယူနိုင်ကြမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာတော့ ဘုရားအမှူးရှိတဲ့ ဆရာတော် သံဃာတော်များနဲ့ ရှင်သာမဏေများအား အရုဏ်ဆွမ်း နေ့ဆွမ်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ ကြွရောက်လာကြမယ့် ဧည့်ပရိသတ်များအား ဧည့်ခံကျွေး မွေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြပြီး လှူဒါန်းမှု အစုစုတို့အတွက် ရွှေခွက်မလို့ ရေစက်ချ အမျှအတန်း ပေးဝေကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီအလှူပွဲတော်ဟာ ဗုဒ္ဓရံသီအသင်း မိသားစုများရဲ့ တတိယအကြိမ်မြောက် ပေါင်းစုအတူပြုကြမယ့် ကောင်းမှုအလှူပွဲတော်ပါပဲ။
အမိမြန်မာပြည်နဲ့ ဝေးကွာနေတဲ့ ဘယ်အရပ် ဘယ်ဒေသမှာပဲ ရောက်နေကြပါစေ အရွယ်ရောက် လာကြပြီဖြစ်တဲ့ ရင်သွေးငယ် သားရတနာတို့ကို သာသနာ့ဘောင် သွတ်သွင်း၍ ရှင်သာမဏေပြုပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒ၊ သာသနာ့အမွေ ခံယူချင်တဲ့ ဆန္ဒဟာ မိဘများရဲ့ သန္တာန်မှာ အမြဲကိန်းဝပ်လျက် ရှိနေကြတာပါ၊ ဒါဟာ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ မြတ်နိုးဖွယ်ကောင်း၊ အတုယူဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတစ်ရပ်ဖြစ်သလို ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားကို အလေးထားမှု တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ရည်မှန်း စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်း အလှူဒါနပြုလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကာယကံရှင် မိသားစုများ ၀မ်းသာကြည်နူး ပျော်ရွှင်နေကြမှာဖြစ်သလို၊ ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟတွေလည်း ထပ်တူထပ်မျှ ကြည်နူးဝမ်းမြောက် နေကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ အခြားအခြားသော အလှူတွေနဲ့ မတူဘဲ လှူဒါန်းပြီး နောက်မှာ လည်း ဖန်ဝါဆင်မြန်းထားတဲ့ သားကိုရင်ကို တွေ့မြင်ရတဲ့ မိဘတို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးမှာ ပီတိတွေဖုံးပြီး ပြုံးပျော် ကြည်နူး နေကြမယ့် အလှူပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းကန်ဘုရားကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မလာဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့် သားရတနာကို အကြောင်းပြု ကောင်းမှုပြုဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းကန်ဘုရားကို လာရောက်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ၊ ဆွမ်းခဲဖွယ်စသည် ကပ်လှူချင်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် စေတနာတွေ သဒ္ဓါအားတွေ လည်း အရင်ကထက် ပိုမိုတိုးပွားလို့ လာခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ တိုးပွားလာကြတဲ့အတွက် ရှင်သာမဏေ ၀တ်နေကြစဉ်ရက်များအတွင်း နေ့စဉ် အရုဏ်ဆွမ်း နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြမယ့် အလှူရှင်များ လည်း အသီးသီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ယခုလို ရှင်ပြုအလှူပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ကြတာဟာ သားရတနာရှိလို့ ပြုလုပ်နိုင်ကြတာဖြစ်ပြီး သာသနာ့ ဒါယကာ၊ သာသနာ့ ဒါယိကာမ အဖြစ်ကိုလည်း ခံယူနိုင်ကြတာပါ၊ သားရတနာများ ရှင်သာမဏေ ၀တ်ခွင့် ဖန်ဝါဆင်မြန်း မြတ်သင်္ကန်းကို ဆင်မြန်းခွင့်ရတာဟာလည်း ဆရာတော် သံဃာတော်တွေ ရှိနေကြလို့ပါ၊ ဆရာတော် သံဃာတော်တွေ ရှိနေကြတာဟာလည်း မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမ သာသနာ တော် ရှိနေဆဲ တွေ့ကြုံနေဆဲဖြစ်လို့ပါ၊ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ကြုံနေကြရတာဟာလည်း မြတ်စွာဘုရား ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့လို့ပါ၊ အကယ်၍ မြတ်စွာဘုရားရှင် ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်မှု မရှိခဲ့ရင် ဒီကနေ့ သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ကြုံကြရမှာ မဟုတ်ပါ၊ သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ကြုံခွင့် ဆုံဆည်းခွင့် မရခဲ့ရင် လည်း ရဟန်း သံဃာတော်တွေဆိုတာ ရှိမှာမဟုတ်ပါ၊ ရဟန်း သံဃာတော်တွေမှ မရှိခဲ့ရင်လည်း ရှင်အဖြစ်၊ ရဟန်းအဖြစ်ကို ခံယူနိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါ၊ ရှင်အဖြစ်၊ ရဟန်းအဖြစ်ကိုမှ ခံယူခွင့် မရကြရင်လည်း သာသနာ့အမွေခံလို့ ခေါ်ဆိုရမယ့် ရှင့်ဒါယကာ၊ ရှင်ဒါယိကာမအဖြစ် ခံယူနိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါ၊ ယခုအခါ အကြောင်းအကျိုး ညီညွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် သာသနာ့အမွေ ခံယူခြင်းဆိုတဲ့ အခွင့်ထူးကို ရရှိကြတဲ့ သူတော်ကောင်းများ ဖြစ်နေကြရပါလားလို့ နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ပြီး ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်နိုင်ကြရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သာသနာ့ဘောင်မှာ ရှင်အဖြစ်ကို ရရှိကြတဲ့ ရင်သွေးငယ်တွေဟာလည်း ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမတွေကို သင်ယူလေ့လာခွင့်၊ သရဏဂုံ သီလတွေ ဆောက်တည်ကျင့်သုံးခွင့် စတာတွေကိုလည်း ရရှိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်ရဟန်းအဖြစ်ကို ရရှိဖို့ရန် ခဲယဉ်းလှတယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတွက် ခဲယဉ်းလှတဲ့ ရှင်သာမဏေအဖြစ်ကို ရရှိနိုင်တာဟာလည်း အခွင့်ကောင်းတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ တတိယအကြိမ်မြောက် ပေါင်းစုအတူပြုမယ့် ကောင်းမှုအလှူပွဲရဲ့ အကျိုးရလာဒ်ပဲ ဆိုတာ သိမြင်ကြပြီး ကုသိုလ်တရားများ တိုးပွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာ များ ပို့သလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Pannavamsa / 6:35 AM / Comments: (0)
၁၅. ၈. ၂၀၁၅ ရက်နေ့မှာ Skjeng မြို့တွင် နေထိုင်ကြတဲ့ ကိုသက်လွင်ဦး + မနုလှိုင်ထွေး ဇနီးမောင်နှံတို့ နေအိမ်မှာ ဗုဒ္ဓါဘိသေက ဘုရားအနေကဇာတင်ပွဲနှင့် ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ Skjeng မြို့သို့ ဗုဒ္ဓရံသီအသင်း မိသားစုအချို့နဲ့ အတူ ကြွသွားခဲ့ပါတယ်၊ ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ သီဟာသနပလ္လင်မြတ်ပေါ်မှာ သပ္ပါယ်စွာသီတင်းသုံး စမ္ပာယ်တော်မူနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်မြတ်ကို ဗုဒ္ဓါဘိသေက ဘုရားအနေကဇာတင်ခြင်း ကောင်းမှုမင်္ဂလာ ပြုလုပ်ပါတယ်၊ အဲဒီနောက် မြတ်စွာဘုရား အမှူးထား၍ ဆွမ်းခဲဖွယ်များ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ဧည့်ပရိသတ်များ အားလည်း ကျွေးမွေးဧည့်ခံခြင်း၊ ရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်၍ ၀ါဆိုသင်္ကန်းနှင့်တကွ လှူဒါန်းဖွယ်ဒါတဗ္ဗ ၀တ္ထုအစုစုတို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ပရိတ်တရားတော်များ၊ အနုမောဒနာ တရားတော်များကို နာယူခြင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုပြုကြ၍ လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့အတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှအတန်းများ ပေးဝေခဲ့ ကြပါတယ်။
ပရိတ်တရားတော်များကို နာယူပြီးသောအခါ အလှူရှင်မိသားစုများနှင့် တရားနာပရိသတ်များအား အနုမောဒနာ တရားစကားအနေဖြင့် ဘုရားရှင်အားနေ့စဉ် ရှိခိုးပူဇော်ကြဖုို့ရန်နှင့် အပါယ်မကြောက် ခုနစ်ယောက်ဆိုတဲ့ တရား ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ဂုဏ်တော်တွေကို နေ့စဉ်ပူဇော်သင့်ပုံတွေကို မစိုးရိမ် ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ လင်္ကာဆောင်ပုဒ် (၆) ခုကို မှီငြမ်းပြုပြီး ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
၁။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း နံနက်အိပ်ရာမှနိုးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေ၊ ညအိပ်ရာဝင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ဖို့ရန်နှင့် အနန္တောအနန္တငါးပါးတို့ကို အမြဲတမ်းရှိခိုး ပူဇော်ကြဖို့ရန် လိုအပ်လှတဲ့အတွက် ပထမစာပိုဒ်အနေနဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက (နေထွက်နေ၀င် ကိုးဂုဏ်ရှင် နေ့စဉ်ရှိခိုးမယ်၊ အနန္တငါး ဂုဏ်တော်များ ညွတ်တွားကန်တော့မယ်) လို့ စပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂။ နေ့စဉ်အိပ်ရာမှ နိုးတဲ့အခါ မျက်နှာမသစ်ခင် မိမိမျက်နှာသစ်မယ့်ရေဟာ ကြည်လင်အေးမြ သလို မိမိနှင့်တကွ အားလုံးသောသတ္တ၀ါတွေလည်း ကြည်လင်အေးမြကြပါစေဆိုတဲ့ မေတ္တာဘာဝနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း ပွားများကြရပါမယ်၊ မျက်နှာသစ်နေရင်းနဲ့လည်း မိမိခန္ဓာကိုယ်ဟာ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့၊ တစ်လ ထက် တစ်လ၊ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အိုမင်းရင့်ရော်လာပုံတွေကို သတိထားဆင်ခြင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်းတို့ကို ဒုတိယစာပိုဒ်အနေနဲ့ (မျက်နှစ်သစ်လျှင် ရေကိုမြင် မြင်စဉ်မေတ္တာပွားပါ့မယ်၊ သစ်ရင်းသစ်ရင်း လျော့ယိုယွင်း ရုပ်ဆင်းသတိထားပါ့မယ်) လို့ စပ်ဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။
၃။ မိမိနဲ့ အလုပ်အကိုင် စီးပွားဥစ္စာ ရာထူးဌာနန္တရ စသည်တူကြတဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ကြဆုံကြတဲ့ အခါ ပြိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့စိတ်တွေ ပုထုဇဉ်တို့ အလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်၊ အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခါမှာ မေတ္တာစိတ်လေးဖြစ်အောင် မိမိစိတ်ကို မွေးမြူတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်၊ အကယ်၍ မေတ္တာစိတ် တွေ မမွေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ပြိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက် တတိယစာပိုဒ်အနေနဲ့ ( တန်းတူတွေ့လျှင် မေတ္တာဝင် မ၀င်နိုင်က ပြိုင်တတ်တယ် ပြိုင်မယ့်အစား မေတ္တာပွား စိတ်ထားပြုပြင် ပြောင်းပါ့မယ်) လို့ စပ်ဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။
၄။ ကိုယ့်ထက် စီးပွားရေး၊ ကြီးပွားရေး၊ ပညာရေး ရာထူးဌာနန္တရ စသည်နိမ့်ကျတဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ ကရုဏာထားပြီး ကြင်နာစွာပြုမူဆက်ဆံတတ်ဖို့ ကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရင် အကူအညီတွေပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်၊ အကယ်၍ ကရုဏာမှ မထားနိုင်ဘူးဆိုရင် မာန်တတ်မဲတတ် အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့အတွက် စတုတ္ထစာပိုဒ်အနေနဲ့ (ကိုယ့်အောက်နိမ့် လျှင် ကရုဏာဝင် မ၀င်နိုင်က နိုင်တတ်တယ် နိုင်မယ့်အစား ကရုဏာပွား စိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းပါ့မယ်) လို့ စပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၅။ ကိုယ့်ထက် အစစအရာရာ ကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့သူတွေ တွေ့မြင်ရတဲ့အခါ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာဖြစ်ကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်၊ အကယ်၍ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုတဲ့ မုဒိတာမှ မဖြစ်ဘူးဆိုရင် မနာလိုမှု ဣဿာတရားတွေ ၀င်လာတတ်တဲ့အတွက် ပဉ္စမစာပိုဒ်အနေနဲ့ ( ကိုယ့်ထက်သာလျှင် မုဒိတာဝင် မ၀င်ဣဿာ ယိုင်တတ်တယ် ယိုင်မယ့်အစား မုဒိတာပွား စိတ်ထားပြုပြင် ပြောင်းပါ့မယ်) လို့ စပ်ဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။
၆။ များသောအားဖြင့် လူတွေဟာ ရုပ်ပိုင်းလှပဖို့ကိုပဲ ငွေကုန်ကြေးကျတွေ အကုန်ခံကာ ပြင်ဆင်နေကြပြီး မိမိတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုတော့ ပိုပြီးတော့လှအောင် ပိုပြီးတော့ ယဉ်ကျေးအောင် ဆိုပြီး ပြင်ဆင်တဲ့သူက အလွန်ပဲနည်းပါးလှပါတယ်၊ သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင် ပညာရှင်များရဲ့ အမြင်က ရုပ်ကိုလည်း လှပအောင် နေ့စဉ်ပြင်ဆင် ချယ်သပြုပြင်နေကြသလို စိတ်ကိုလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ယဉ်ကျေးအောင် လိမ္မာလာအောင် ပြင်ဆင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ရှုမြင်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပြင်ဆင်ကြမှ သာလျှင် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာလည်း ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဆဋ္ဌမစာပိုဒ်အနေနဲ့ (ရုပ်ကိုလည်းပြင် စိတ်လည်းပြင် ပြင်ဆင်တိုင်းလှ ပြုတိုင်းရ သုခနိဗ္ဗာန်တိုင်လိမ့်မယ်) လို့ စပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၀ါဆိုသင်္ကန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး …..
တိသရဏ ငါးပဉ္စ မဲချစာရေးတံ၊
ပိဏ္ဍပတ်ဆွမ်း၊ ၀ါသင်္ကန်း၊ လှူဒါန်းသောက်ရေကန်၊
ကျောင်းလှူတစ်ဝ၊ နိဗဒ္ဓ ပုညရှိသူမှန်၊
သောတာလိုပဲ ဂတိမြဲ သူလည်းပါယ်မပြန် ဆိုတဲ့အတိုင်း သရဏဂုံသုံးပါး ဆောက်တည်ထားကြတဲ့သူ၊ ငါးပါးသီလ လုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်းကြတဲ့သူ၊ စာရေးတံမယ် လှူဒါန်းတဲ့သူ၊ လဆန်း လဆုတ်ဆွမ်းခဲဖွယ်စသည် လှူဒါန်းကြတဲ့သူ၊ ၀ါဆိုသင်္ကန်းလှူဒါန်းကြတဲ့သူ၊ ရေတွင်းရေကန် လှူဒါန်းထားကြတဲ့သူ၊ ကျောင်းအလှူအတွက် လှူဒါန်းကြတဲ့သူတွေဟာ သောတာပန်နဲ့ အလားတူတဲ့ သူတွေ အပါယ်ဘေးမှ ကင်းဝေးစေနိုင်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အပါယ်မကြောက် ခုနစ်ယောက် စာရင်းထဲဝင်တဲ့သူတွေပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် အလှူရှင် အလှူအမ မိသားစုများနှင့်တကွ တရားနာပရိသတ်များအားလုံး အပါယ်ဘေးမှ ကင်းဝေနိုင်ကြပြီး မဂ်ဖိုလ်ိနိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့ သူတော်ကောင်း သူမြတ်လောင်းများ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပတ္ထနာ ပြုခဲ့ပါတယ်။
နည်းတာ များတာထက် လွဲမှာ မှားမှာကို စိုးတယ်
Posted by Pannavamsa / 12:26 AM / Comments: (0)
အလှူကောင်းမှု ပြုလုပ်ကြတဲ့အခါ နည်းတာ များတာထက် လွဲမှာ မှားမှာကို သတိပြုရပါမယ်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အနည်းအများထက် အလွဲအမှား မဖြစ်ဖို့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်၊ မိမိသူတစ်ပါး နှစ်ဦးသားတို့ရဲ့ အပေါ်မှာ ချမ်းသာသုခပြည့်ဝစေချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေ၊ ၀ဋ်ဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်လိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေ ရှေ့ထားပြီး ပြုလုပ်ကြမယ်၊ ပကာသန မဖက်သော၊ ကြွားဝါလိုမှု မရှိသော ကောင်းမှု အလှူမျိုးဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင် မလွဲသော အလှူ၊၊ မမှားသော အလှူဖြစ်လို့ စိုးရိမ်စရာ မလိုတဲ့အလှူလည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။
နောက်ပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဒေသနာတော်အရ ကောင်းမှုအလှူဟာ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲ အတွင်းမှာ ကျင်လည်ရသောအလှူ (၀ဋ္ဋနိဿိတ ဒါန)၊ သံသရာဝဋ်မှ လွတ်မြောက်သောအလှူ (၀ိဝဋ္ဋနိဿိတ ဒါန) ရယ်လို့ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဒါကိုပဲ လူချမ်းသာ၊ နတ်ချမ်းသာ၊ ဗြဟ္မာချမ်းသာကိုသာ တောင့်တသော အလှူ နဲ့ နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာကိုသာ တောင့်တသော အလှူလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
သံသရာထဲမှာ ကျင်လည်စဉ်အတွင်း ချမ်းသာချင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားချင်လို့ ကောင်းမှုပြုမယ် ဆိုရင် ကျင်လည်ရတဲ့ ဘ၀တိုင်း၊ ဖြစ်လေရာဘ၀တိုင်းမှာ ချမ်းသာသုခနဲ့ ပြည့်စုံမှု စသည်ကို မလွဲဧကန် အမှန်ပဲ ရရှိကြမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ နန်းမြို့တော်ကိုတော့ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အလှူက အကျိုး ဖြစ်စေနိုင်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သာမန်အားဖြင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင် အလှူ ဒါနဟာ ဖြစ်လေရာ ဘ၀တိုင်း ချမ်းသာသုခကို ပေးစွမ်းနိုင်တာ မှန်သော်လည်း ဥာဏ်မျက်စိနဲ့ ကြည့်တဲ့အခါ မွေး အို နာ သေ ဆိုတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခက မလွတ်မြောက်သေးတဲ့အတွက် ချမ်းသာစစ် ချမ်းသာမှန်ကို ပေးစွမ်းတယ် ပြောလို့ မရနိုင် သေးပါ။ မိမိပြုခဲ့တဲ့ ဒါနကုသိုလ်ဟာ မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ကိုမှ အထောက်အပံ့ မပေးဘူးဆိုရင် အဲဒီအလှူဟာ ဖြစ်လေရာ ဘ၀ဆက်တိုင် မွေး အို နာ သေ ဆိုတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံစားရပါစေလို့ ကောင်းမှုပြုပြီး တောင်းဆုပြုသလို ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ မည်သည့် ဒါန ကောင်းမှုမျိုးကိုပဲ ပြုလုပ်သည်ဖြစ်ပါစေ မွေး အို နာ သေဆိုတဲ့ ဘေးဒုက္ခတို့မှ လွတ်ကင်းရာမှန် မြတ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ အထောက်အပံ့ ဖြစ်ပါစေလို့ စိတ်မှာညွတ်ပြီး ပေးလှူရပါမယ်၊ ဒါဆိုရင် မြတ်သောအလှူလည်း ဖြစ်သလို ၀ိဝဋ္ဋနိဿိတ ဒါန (သံသရာဝဋ်မှ လွတ်မြောက်သော အလှူ) မျိုးလည်း ဖြစ်သွားပါတယ်၊ ဒီလိုအလှူမျိုးဟာ နည်းပေမယ့် မလွဲသောအလှူ၊ များပေမယ့် မမှားသော အလှူမျိုးပါပဲ၊ ဒါကြောင့်လည်း ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တိုင်း ဣဒံ မေ ပုညံ နိဗ္ဗာနဿ ပစ္စယော ဟောတု လို့ ဆရာတော် သံဃာတော်များက မိန့်ဆိုပေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်များ ကြားဖူးနားဝရှိနေတဲ့ ဥမ္မာဒန္တီ အမျိုးသမီးဟာ အတိတ်ဘ၀က ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အရှင်မြတ်ကို အ၀တ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်လေရာဘ၀တိုင်း ရုပ်ရည်လှပပါစေ၊ မြင်သမျှ အမျိုးသားတိုင်း ရူးသွပ်ပါစေလို့ ကောင်းမှုပြုရင်း တောင်းဆုပြုခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီကောင်းမှု တောင်းဆုတွေ ကြောင့် ရုပ်ရည်လှပပြီး၊ မြင်သမျှ အမျိုးသားများလည်း ရူးသွပ်စေခဲ့ရပါတယ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ ရုပ်ရည်လှပပါစေ အဲဒီအလှက အိုမှု နာမှု သေမှုဘေး ဒုက္ခကိုတော့ မကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကောင်းမှုဟာလည်း မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ရဲ့ အထောက်အပံ့လည်း မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး၊ ဒီအလှဟာလည်း ထာဝရအလှမဟုတ်ဘဲ တဒင်္ဂအလှမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်၊ အကယ်၍သာ အဲဒီဘ၀က သစ္စာလေးပါးကို သိပါရစေလို့သာ ကောင်းမှုတွေ ပြုရင်း တောင်းဆုတွေပါချွေခဲ့မယ်ဆိုရင် လှလည်းလှ သစ္စာတရားကိုလည်း ထိုးထွင်းသိမြင်ရလို့ အလှနဲ့ ဆန္ဒ တစ်ထပ်တည်းကျခဲ့မှာပါ။ နောက် စူဠသုဘဒ္ဒါလည်း ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အရှင်မြတ်အား ကြာပန်းများလှူပြီး သစ္စာဓမ္မကို သိပါရစေလို့ တောင်းဆုမချွေဘဲ အမုန်းမာန်ရဲ့ လှည့်စားမှုကြောင့် ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းရဲ့ အစွယ်ကို နားတောင်းပန်ပါရစေလို့ ကောင်းမှုပြုရင်း မှားယွင်းစွာနဲ့ တောင်းဆုချွေခဲ့ဖူးပါတယ်၊ အဲဒီကောင်းမှုရဲ့ တောင်းဆုကြောင့် ဆဒ္ဒန်ဆင်းမင်းကို သတ်ခိုင်းပြီး ဆင်စွယ်ကို ရတဲ့အခါမှာ သောက ပရိဒေ၀ ဒုက္ခတွေ ခံစားရကာ သေပွဲဝင်ခဲ့ရရှာပါတယ်၊ ဒါတွေဟာ ကောင်းမှုနည်းလို့ များလို့ မဟုတ်ဘဲ တောင်းဆုလွဲလို့ မှားလို့ ဆိုးကျိုးခံစားရတဲ့ သာဓကတွေပါပဲ၊ အဲဒါကြောင့် ကောင်းမှုပြုတဲ့ အခါတိုင်း နည်းတာ များတာထက် လွဲမှာ မှားမှာကို စိုးရတယ်လို့ ဆိုရတာပါ။
မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကပဲ ပုဏ္ဏာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်ကိုင်ရင်း ရရှိလာတဲ့ မုန့်အနည်းငယ်ကို မြတ်ဗုဒ္ဓ အား ဆက်ကပ်လှူဒါန်း ကောင်းမှုပြုရင်း အရှင်ဘုရားတို့ သိတော်မူ ရတော်မူ ဆိုက်တော်မူတဲ့ သစ္စာလေးပါး တရားတော်ကို သိမြင်ပါရစေဘုရားလို့ တောင်းဆုပြုခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီနောက် မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားဒေသနာကို ကြားနာရတဲ့အခါ သောတာပန်အဖြစ်ကို ဆိုက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်၊ ကောင်းမှုနည်းပေမယ့် တောင်းဆုမလွဲခဲ့တဲ့အတွက် ကောင်းမှုရဲ့အကျိုး အစစ်အမှန်ကို ရရှိခဲ့တဲ့ သာဓက ဖြစ်ရပ်ပါ။
ဒါကြောင့် မည်သည့်ကောင်းမှုမျိုးကို ပြုလုပ်သည်ဖြစ်ပါစေ ကောင်းမှုအနည်း အများထက် တောင်းဆု အလွဲအမှား မဖြစ်ဖို့ရန် အထူးအရေးကြီးလှကြောင်းနဲ့ နည်းတာ များတာထက် လွဲမှာ မှားမှာ စိုးရတယ်မျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ကောင်းမှုကံပြုတိုင်း တောင်းဆုမှန်ကန်ဖို့ရန် အသိသတိယှဉ်သင့်ပါ ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
သားကျွန် မယားကျွန်နဲ့ သာသနာ့ကျွန်
Posted by Pannavamsa / 11:48 AM / Comments: (0)
ဒီရက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းဒကာ၊ ဒကာမတွေ စုပေါင်းပြီး ကျောင်းသန့်ရှင်းရေးတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်၊ ဒကာတွေက ကျောင်းဆောင်အမိုးဆေးကြောပြီး ဆေးသုတ်ဖို့ရန် ဆောင်ရွက်ကြသလို၊ ဒကာမများက လည်း မြက်ပင်များ၊ ပန်းပင်များ၊ အမှိုက်များ စသည်တို့ကို ပြုပြင်ကြ၊ သန့်ရှင်းကြပါတယ်။ တက်တက်ကြွကြွ လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ ကျောင်းဆောင်အမိုးများ ရေညှိများတက်နေတဲ့အတွက် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပြီး ပြန်လည်ဆေးသုတ်ကြမှာပါ၊ ကျောင်းစတင်တည်ထောင်တဲ့ ၂၀၀၇ - ခုနှစ်ကပဲ ကျောင်းအမိုးများကို ဆေးကြော သန့်ရှင်း ဆေးသုတ်ခဲ့ပြီး၊ အခုမှ သန့်ရှင်းရေး ပြန်လုပ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေ သန့်ရှင်း ရေးတွေလုပ်ကြ၊ ကျောင်းဝေယျာဝစ္စများ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေကြတာကို ကြည့်ရင်း ငယ်စဉ်က ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝေယျာဝစ္စများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရပုံ၊ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာတော်ကြီး၏ သြ၀ါဒ ချီးမြှင့်ခဲ့ပုံ တွေကို အမှတ်ရခဲ့ပါတယ်။
ကလေးဘ၀ ကျောင်းနေစဉ်ကစ၍ နေ့စဉ် ကျောင်းမတက်ခင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အားလုံး စုပေါင်းပြီး အမှိုက်လှည်းခြင်း၊ သောက်ရေအိုးများ ရေဖြည့်ခြင်း၊ ဘုရားပန်းအိုးများ ပန်းလဲခြင်း၊ ဘုရားဝတ်တက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ စည်းကမ်းတစ်ရပ်၊ တာဝန်တစ်ရပ်အနေနဲ့ သတ်မှတ် ထားပြီး ပြုလုပ်ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အတန်းကျောင်းများမှာသာ ပြုလုပ်ကြရသည်မဟုတ် ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းများတွင်လည်း နေ့စဉ် နံနက် ဆွမ်းခံပြန်လာပြီးတိုင်း ကျောင်းရဲ့ သေနာသန၀တ်တို့ကို ပြုလုပ် ကြရပါတယ်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုဟာ မြင်ရသူတို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို အေးချမ်းစေတယ်၊ ကြည်လင်စေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း ကျန်းမာရေးကို များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။
စာရေးသူဟာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ နီးစပ်မှုရှိလေတော့ ဆရာဘုန်းကြီးတွေရဲ့ ဆုံးမသြ၀ါဒကို မကြာခဏ နာယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဘုန်းကြီးက သေနာသန၀တ်လို့ဆိုရတဲ့ ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ စေတနာပါပါနဲ့ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ ဥာဏ်ပညာကို ထက်မြက်စေကြောင်း၊ ဘုရားသာသနာနဲ့ ကြုံတွေ့ခွင့်ရပြီး ပြုခွင့်ရတဲ့ ကောင်းမှုတွေဟာ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင် ကြောင်း ငါတို့ချည်းပဲ ဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့ မမှတ်ယူဘဲ၊ လယ်တီဆရာတော်တို့ရဲ့ ထုံးကို နှလုံးမူပြီး ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဤကဲ့သို့ မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ပရိယတ်၊ ပဋိပတ်အရာမှာ လိမ္မာကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ လယ်တီဆရာတော်ကြီးဟာ နေ့စဉ် အမှိုက်လှဲခြင်း၊ သောက်ရေ သုံးရေတည်ထားခြင်း၊ ကုဋီရေများ ဖြည့်ထားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ၀တ်ထားပြီး နံနက်စောစောထ၍ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ တပည့် ကြီးငယ်တို့က နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အမှိုက်များ သန့်ရှင်းနေခြင်း၊ သောက်ရေအိုးများ ပြည့်နေခြင်း စသည်တို့ကို တွေ့မြင်ရတဲ့အတွက် ဘယ်သူများ နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေလဲဆိုတာ သိချင်တာနဲ့ စုံစမ်းတဲ့အခါ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး ကိုယ်တော်တိုင် ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကို သိခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးကို ဤအမှုများ မပြုလုပ်ရန်နဲ့ တပည့်များ ပြုလုပ်ပါမည့်အကြောင်း လျှောက်ထားကြပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးက သူ့ရဲ့ လက်တွေ ခြေတွေဟာ တစ်သံသရာလုံး သားကျွန် မယားကျွန်တွေပဲ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ၊ အခုမှ ဘုရားရှင်ရဲ့ သာသနာတော်နဲ့ ကြုံတွေ့ခွင့်ရလို့ သာသနာရဲ့ကျွန် ဖြစ်ခွင့်ရတာ၊ သာသနာတော်နဲ့ စပ်တဲ့ ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတာကို မတားကြ ပါနဲ့လို့ တပည့်များကို မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
လေးစားလိုက်နာပြုမူ မှတ်သားသင့်တဲ့ သြ၀ါဒပါပဲ၊ မှန်ပါတယ်၊ ဘုရားရှင်ရဲ့ သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ကြုံဖို့ဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံ ကောင်းမှုနဲ့တွေ့ကြုံဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါ၊ မလွယ်လှလုိ့လည်း မြတ်စွာ ဘုရားက ဗုဒ္ဓုပ္ပါဒေါ ဒုလ္လဘော = ဘုရားဖြစ်ဖို့ရန်၊ ဘုရားရှင်ရဲ့ သာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံဖို့ရန် ခဲယဉ်းတယ်လို့ မိန့်တော်မူခဲ့တာပါ။ အကယ်၍ တွေ့ကြုံခဲ့ရင်လည်း မိမိက ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖြစ်ကို ရရှိနေမှပါ၊ ဘာသာခြားဖြစ် နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း သာသနာတော်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ကောင်းမှုတွေ ပြုနိုင်ဖို့ မလွယ်ကူလှပါဘူး၊ တစ်နည်းအားဖြင့် သားကျွန် မယားကျွန်အဖြစ်သာခံယူနေကြရမှာဖြစ်ပြီး သာသနာ့ကျွန် အဖြစ် ခံယူနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သားကျွန် မယားကျွန်ဆိုတာ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်တော်မူခဲ့သလို တစ်သံသရာလုံးတွေ့ကြုံခဲ့ပြီး၊ တွေ့ကြုံနေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုရား သာသနာတော်နဲ့ တွေ့ကြုံဆဲ အခိုက် အတန့်လေးမှာ သားကျွန် မယားကျွန်အဖြစ်သာမကဘဲ သာသနာ့ကျွန်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ သာသနာတော်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ကောင်းမှုတွေကို ကြိုးစားပြုမူရင်း အသိဥာဏ်ရင့်သန် မြင့်မြတ်တဲ့ သူတော်ကောင်းများဖြစ် အောင် ကြိုးစားသင့်လှပါတယ်။
Posted by Pannavamsa / 12:55 AM / Comments: (0)
မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုးစားအားထုတ်လို့ တိုးတက်အောင်မြင်လာတဲ့အခါ ဘ၀င်မမြင့်အောင် မမောက် မာအောင် ဒီထက်ပိုပြီး အောင်မြင် တိုးတက်အောင် ကြိုးစားစေလိုတဲ့အတွက် အထက်ကို မော့ကြည့်လိုက်ပါ၊ ကိုယ့်ထက်အစစအရာရာ သာနေတဲ့သူတွေ လောကမှာ အများကြီးရှိပါလားဆိုတဲ့ အသိသတိလေး ၀င်အောင်ရယ်၊ နောက်ပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရင်း လုပ်ငန်းအဆင်မပြေလို့ စိတ်ဓာတ်ကျ နေသူတွေအတွက် အောက်ကိုငုံ့ကြည့်လိုက်ပါ၊ ကိုယ့်ထက်အစစအရာရာ စီးပွားရေး ကြီးပွားရေး နိမ့်ကျနေတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးရှိပါ သေးလားဆိုတဲ့ အသိလေးဝင်ပြီး စိတ်သက်သာရာ ရအောင် ပြန်လည်ကြိုးစားချင်အောင်ရယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပညာရှင်များက ဒီစကားလေး မိန့်သွားတာ ဖြစ်မယ်လို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။
ရေးပြီးတဲ့နောက် ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာသာရေးအမြင်လည်းရှိ၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကို လည်း အားပေးကူညီလေ့ရှိတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက် ပြောပြသွားခဲ့တာကို အမှတ်ရခဲ့ပါတယ်၊ ၂. ၈. ၂၀၁၄ ရက်မှာ အသိမိတ်ဆွေနဲ့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ မိတ်ဆွေက အထက်ကိုမော့ကြည့်၊ အောက်ကိုငုံ့ကြည့်ဆိုတဲ့ စကားကို သူလည်း ယခုလိုမြင်တဲ့အကြောင်းရယ်၊ နောက်ထပ်လည်း အမြင်တစ်မျိုးထပ်မြင်သေးတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း ဒီစကားပေါ်မှာ ဘယ်လိုအမြင်မျိုး ထပ်မြင်သေးလဲ လို့ မေးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း စာရေးသူကို ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဘယ်အမြင် ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာတော့ မသိရပေမယ့်၊ သူ့ရဲ့အမြင်တစ်မျိုးကိုတော့ ပြောပြသွားလို့ သိခဲ့ရ ပါတယ်။
ကောင်းတာကို လုပ်ရင် ကောင်းတဲ့အကျိုးကို ခံစားရမှာဖြစ်လို့ တစ်ချိန်မှာ အထက်တန်းကို ရောက်ရမယ်၊ အထက်တန်းဖြစ်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘ၀ကို ရောက်နေကြတဲ့ သူတော်စင် သူတော်ကောင်း တွေဟာ ကောင်းမြတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အကျင့်တွေကို ပြုကျင့်ခဲ့ကြလို့ရောက်ရတာပါ၊ မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ နေရာကို ရောက်ချင်ကြတယ်ဆိုရင် သူတော်စင် သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ ထုံးကိုနှလုံးမူပြီး ကောင်းမြတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အကျင့်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး မကောင်းတာတွေ ပြုမူလုပ်ဆောင်နေ တဲ့သူဟာ နိမ့်ကျတဲ့ဘ၀ကို ရောက်ကြရမယ်၊ နိမ့်ကျတဲ့ဘ၀မှာ ဆင်းဆင်းရဲရဲ ကျင်လည်နေကြရမယ်၊ မည်သူမဆို မကောင်းတာတွေကို ပြူမူ ပြောဆို ကြံစည်နေမယ်ဆိုရင် နိမ့်ကျတဲ့ဘ၀ ဆင်းရဲတဲ့ ဘုံဘ၀ကို ရောက်မှာပဲလို့ သူ့အနေနဲ့ မြင်သေးတဲ့အကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီစကားကို ကောက်ချက်ချ လိုက်ရင် အထက်ဆိုတာ သုဂတိဘ၀ (ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံ)၊ အောက်ဆိုတာ ဒုဂ္ဂတိဘ၀ (မကောင်းတဲ့ဘုံ) ကို ဆိုလိုတာတွေ့ရမှာပါ။ သူ့ရဲ့အမြင်ဟာ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းကျိုးရမယ်၊ မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဒေသနာတော်အတိုင်း မြင်တဲ့အမြင် တရားနည်းလမ်းအတိုင်း မှန်ကန်စွာ မြင်တဲ့အမြင်ပါပဲ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် လောကရေး ဓမ္မရေး နှစ်မျိုးလုံးမြင်တဲ့ အမြင်ပဲလို့ ယူဆမိရင်း မစိုးရိမ်တိုက်သစ် နာယကချုပ်ဆရာတော်ကြီးမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကုသိုလ်က ကိုယ့်ဘ၀ မုချမြင့်အောင် မြှင့်လေ့မယ်၊ အကုသိုလ်က ကိုယ့်ဘ၀ မုချနိမ့်အောင်နှိမ့်လေ့မယ် လင်္ကာလေးကို အမှတ်ရခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဘ၀ကို ပုံသေတွက်မထားနဲ့လေ တဲ့
Posted by Pannavamsa / 9:07 AM / Comments: (0)
စီးပွားရေး ပညာရေး လူမှုရေး စတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ အောင်မြင်တာ တွေ တိုးတက်တာတွေရှိသလို၊ လုပ်ကိုင်ရင်း ကြိုးစားရင်းနဲ့ အဆင်မပြေတာတွေ ပျက်စီး ဆုတ်ယုတ်သွား တာတွေလည်း ရှိတတ်တာဟာ သဘာဝပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်လည်း လောကမှာ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရသလို အခြားသူများလည်း တွေ့ကြုံနေကြရတာပါပဲ။ အဆင်ပြေ ချောမွေ့တဲ့အခါ ပုထုဇဉ်တို့ သဘာဝ ထောင်လွှား ချင်တဲ့စိတ်၊ ၀ါကြွားချင်တဲ့စိတ်တွေ၊ သူတစ်ပါးအပေါ် အသာစီးဆက်ဆံချင်တဲ့ စိတ်တွေ မသိ မသာရော၊ သိသိ သာသာပါ ၀င်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ပညာရှင်များက အထက်ကို မော့ကြည့် ပါတဲ့။ ကိုယ့်ထက်သာပြီး ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်နေကြတဲ့သူတွေ အများကြီးပါလားဆိုတဲ့ အသိ သတိလေးဝင်သွားအောင်လို့ပါ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရင်း ကြိုးစားရင်းနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့လည်း တွေ့ကြုံရတတ်ပြန်ပါတယ်၊ အဲဒီအခါ မခံစားနိုင်လောက်အောင် သောက ပရိဒေ၀တွေ စသည်ဖြစ်လာတတ် ပြန်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး လူ့ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအလည် မရပ်တည်ရဲ မ၀င်ဆံ့ရဲတဲ့အဆင့် ဘ၀ပျက်တဲ့အဆင့်ထိလည်း ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ အောက်ကိုကြည့်ပါတဲ့၊ ကိုယ့်ထက်နိမ့်ကျတဲ့သူတွေ လောကမှာ အများကြီးရှိပါသေးလားလို့ အသိလေးဝင်ပြီး သက်သာရာ ရအောင်လို့ပါ။ အဆင်ပြေသည်ပဲ ဖြစ်စေ၊ အဆင်မပြေသည်ပဲ ဖြစ်စေ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲ ရပ်တည်နေရ ကြုံတွေ့နေရပါစေ၊ အမြဲတမ်း နှလုံးသွင်းထားသင့်တဲ့ နောက်ထပ်စကားလေးကတော့ ဘ၀ကို ပုံသေတွက်မထားနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားလေးပါပဲ။ ဘ၀င်မြင့်နေ ထောင်လွှားနေတဲ့ သူတွေအတွက် သတိပေးနှိုးဆော်ရာ ရောက်နိုင်သလို အားငယ်နေသူတွေ ဒုက္ခရောက် နေသူတွေအတွက်လည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ စွမ်းအားမြှင့်ပေးရာ ရောက်စေမယ်၊ စွမ်းအားတက်စေမယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ဒီစကားလေးဟာ စာရေးသူရဲ့ နောင်တော်က စာရေးသူးကို တစ်ဆင့် ပြန်ပြောပြတဲ့ စကားလေးပါ။ ငယ်စဉ် စာသင်သားဘ၀ စာမေးပွဲဖြေနေရတဲ့ နေ့တစ်နေ့မှာ နောင်တော်က စာမေးပွဲ မဖြေခင် ကွမ်းယာ သွားဝယ်ပါတယ်၊ ကွမ်းယာရောင်းတဲ့ ကလေးမက ကွမ်းယာအတွက် ပြင်ဆင်ပြီးခါနီးအချိန် အခြားသူများ လည်း ဈေးလာဝယ်ကြလို့ ပြီးအောင် ကွမ်းယာ ထုပ်မပေးသေးဘဲ ဈေးဝယ်လာသူတို့အား အခြားပစ္စည်း လေးများ လှမ်းယူပေး နေရတာနဲ့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပဲ ယူသွားဖို့ ပြောပါတယ်၊ မအားလို့ ပြောလိုက်တာ လား၊ ရင်းနှီးလို့ ပြောလိုက်တာလားတော့ မသိပါ၊ ဒါပေမယ့် နောင်တော်က မယူဘဲ စောင့်နေခဲ့ပါတယ်၊ အခြားသူများ ပြီးမှ ကွမ်းယာ ပြန်ထုပ်ပေးခဲ့ပြီး စောင့်နေတဲ့ နောင်တော်ကို စောင့်မနေဘဲ ကိုယ်ဖာသာကိုယ် ယူသွားလို့ရရဲ့သားနဲ့ ပြောတော့ နောင်တော်က သူသေသေချာချာ မထုပ်တတ်လို့ပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်၊ အဲဒီအခါမှာ ကလေးမက ဘ၀ကို ပုံသေတွက်မထားနဲ့လေ ဆိုတဲ့ ဒီစကားလေးကို ပြောလိုက်ကြောင်း စာရေးသူကို ပြန်ပြောပြပါတယ်။ အမှတ်တမဲ့ ပြောလိုက်တာလား ဒါမှမဟုတ် ဘ၀အတွက် အမှတ်တရ ပြောလိုက်တာလားတော့ ကာယကံရှင်မှ တစ်ပါး မသိနိုင်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သာမန်အမှတ် တမဲ့ပဲ ပြောပြော အမှတ်တရဖြစ်အောင်ပဲ ပြောပြော အမြဲအမှတ်ရပြီး ကျန်နေသင့်တဲ့ စကားလေးပဲလို့ အဲဒီအချိန်ထဲက စာရေးသူ ခံယူမိခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ပြောလိုက်တဲ့ စကားဟာ ဘ၀နဲ့ ရင်းပြီး ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံပြီး ပြောလိုက်တဲ့ စကားလား၊ ဒါမှမဟုတ် လောကမှာ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိတဲ့ သဘော သဘာဝပေါ် အခြေခံပြီး ပြောလိုက်တဲ့ စကားလားဆိုတာ မသိရပေမယ့် စွဲကျန်ရစ်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ။ အော် တစ်ချိန်တုန်းက မှတ်သားခဲ့ဖူးတဲ့ ဘ၀ကို ပုံသေတွက်မထား နဲ့လေတဲ့….